July 12, 2021 - Celegroup
လူတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်(မဖြစ်မနေ ဖတ်စေချင်ပါတယ်)
July 12, 2021 cele group 0
သတိပြုရန်များ… ခေါင်းအရမ်းထိုးကိုက်တာ၊ အပူငွေ့ငွေ့နဲ့ စ ဖျားတာဆို သတိဝင်လိုက်ပါတော့။ အဲဒါ စ ကူးရင် ပြတတ်တဲ့ လက္ခဏာပါ။ လုံးဝအပြင်မထွက်ပါနဲ့။ အိမ်ထဲကလူတွေနဲ့ ခွဲနေပြီး mask တပ်ပါ။ ဖျားပြီး ၂ ရက်လောက် ကြာတဲ့အခါ ရုတ်တရက် အနံ့ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ အချိန်ပါ။ သတိဝင်ပါ။ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ထားရမယ်ဆိုတာကို။ အနံ့ပျောက်ပြီး ၃ ရက်ခန့်အကြာမှာ O2 ကျပြီး အသက်ရှုရခက်တတ်ပါတယ်။ ဆေးရုံမသွားနိုင်ခဲ့ရင် […]
ဒီကာလမှာ မိသားစုအားလုံး သံပုရာသီးတလုံးစီ ဆောင်ထားကြနော် စီရင်မည့်သူ မွေးနေ့မရောက်ခင် တစ်ရက်ကြို ပြီး သံပုရာသီးကို ဈေးကနေ ၉ လုံးဝယ်လာပါ ပြီးရေသေချာဆေး မွေးနေ့မတိုင်ခင် ည (မိမိမွေးနေ့က တနဂ်နွေဆို စနေ 9: 45 )မှာဘုရားကပ် ဘုရားကို သရဏဂုံ ၉ခေါက် သံဗုဒ္ဓေ ကိုးခေါက် ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးခေါက်ဆီ ရွတ် နောက်နေ့မွေးနေ့မနက် ၉ : ၄၅ မှာလည်း တစ်ခါ […]
မိမိအိမ်မှာ လာဘ်ပိတ်စေနိုင်တဲ့ ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေရှောင်ကြဥ်ပါ
မိမိအိမ်မှာ လာဘ်ပိတ်စေနိုင်တဲ့ ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေရှောင်ကြဥ်ပါ လာဘ်ပိတ်စေတ်သော အကျင့်ဆိုးများ ၁။ ဘုရားခန်းတွင် လင်မယား (၂)ယောက် မအိပ်ရ။ ၂။ ယောကျာ်း၏ ညာဘက်တွင် မိန်းမ မအိပ်ရ။ ၃။ နံနက် (၄) နာရီခွဲမှ (၆) နာရီအတွင်းတွင် သာသနာစောင့် နတ်မင်းကြီး (၄) ပါးတို့သည် လူအများစု၏ ကောင်းမှု့ ၊ မကောင်းမှု့တို့ကို ကြည့်ရူသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချ်ိန်တွင် မေထုန်မှီဝဲမှု့ကို အထူးရှောင်ကြဉ်ရမည်။ […]
မိန်းမဖြစ်လာတိုင်း အချိန်တန်လင်ယူသားမွေး လုပ်ရမယ်တဲ့လား….
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးမှာမှီခိုစရာ ယောကျာ်းသားမရှိတာနဲ့ မသင့်တော်ဘူးတဲ့ လင်ယူသားမွေးလုပ်ဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ မိန်းကလေးတွေအဖြစ် မွေးဖွားလာကြတာမဟုတ်ဘူး …! လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အိမ်မက်တွေ ပန်းတိုင်တွေ ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြတာချည်းပဲ မိန်းမသားတွေကလည်း လူသားတွေပဲမို့ ကိုယ့်အိမ်မက်တွေ ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေ အတွက် ရှေ့ဆက်ခွင့်ရှိတယ် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေတိုင်း သာယာတယ်လို့ ထင်နေကြတာလား . . . ? အိမ်ထောင်သည်အမျိူးသမီးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် လင်ယောကျာ်းကို ကြောက်ရတာနဲ့ အိမ်ထောင်ပြိုကွဲမှာကို ကြောက်ရတာနဲ့ အကြောက်တရားတွေ ပူဆွေးမှုတွေကြားမှာပဲ […]
ဝင်ငွေမရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်နဲ့တူတယ်
ကောင်းကင်ကို ကြည့်ပြီးမျှော်လင့်နေရုံပဲ အမြင့်ဆိုတာ သူမအတွက်အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာ.. အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ် ဖက်တွယ်မက်မောနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အခန်းကျဉ်းလေးထဲက မီးလုံးလေးတစ်ခုနဲ့တူတယ် ဖွင့်ခြင်း ပိတ်ခြင်း ခံနေရတဲ့ သူ့အလင်းဟာ ကန့်သတ်နယ်မြေတစ်ခုထဲမှာပါ။ တကယ်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ အများနည်းတူ တောင်ပံဖြန့် ပျံသန်းနိုင်ရမယ်…ဘဝဆိုတာ မျှော်လင့်အိပ်မက်နေရုံနဲ့ တင်းတိမ်မနေသင့့်ဘူး မိသားစုအတွက် လွယ်အိတ်လိုလူမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့… မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ နေမင်းလို ကိုယ်ပိုင်အလင်းလဲရှိသင့်တယ် နေ့အခါလုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင်ကို ကြဲဖြန့်ရင်း ညခင်းမှာလမင်းအတွက်လည်း မျှဝေထွန်းလင်းခွင့်ပေးရမယ်… #Credit -လေးစားစွာဖြင့်-Yi Zawgyi […]
ဒီခေတ်လူငယ်တွေ သိပ်မသိတော့တဲ့ “ ဈေးအစ ဇာတ်အလယ် အဝှာအဆုံး”ဟူသော စကားပုံ အဓိပ္ပါယ်
ဒီစကားလေးက မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရင်ကို တခုခု ဖြစ်ပေါ် စေလိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါသည် ။ ။ ဖာ ဆိုသော စကားက အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခွထွက်နေသော စကားဖြစ်ပါသည် ။ ။ မိတ်ဆွေတို့ ရင်ထဲတွင် ဖာဆိုသော စကားကြားသည်နှင့် ယုတ်ညံ့သော စကားဟု ထင်ကောင်း ထင်ပါလိမ့်မည် ။ ။ ထို အတွေးနှင့် အတူ စကားတစ်ခု ကိုလည်း ရိုင်းပြသည်ဟု ထင်ပါလိမ့်မည် ။ ။ […]
ကိုယ်တွေ သဘောကျရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေ ကွဲကွာနေကြတာ မြင်တော့ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေက အတောမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူတို့နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး အဆင်မပြေကြတော့လို့ပါပဲ …။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ချစ်ပြီး အစစအရာရာနားလည်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားခဲ့ပေမယ့် အဖုထစ်တွေ ၊ ပြဿနာတွေများလာတဲ့အခါ … ညှိယူလို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ … ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ဖို့ ရွေးချယ် လိုက်ကြတာပါပဲ …။ ဒါဆို ဘာလို့ လက်ထပ်ကြသေးလဲလို့ မေးခွန်းတွေ ထွက်လာဦးမှာပါ။ ဘယ်သူမှလည်း မကွဲချင်ပါဘူး။ […]
အဆုပ်ထဲကို ဘာရောဂါပိုးမှမဝင်နိုင်အောင် ဘုန်းဘုန်းတို့ အမြဲသောက်နေကျ ဆေးတစ်ခွက် အဆုပ်ထဲကို ဘာရောဂါပိုးမှမဝင်နိုင်အောင် ကာကွယ်နည်း။ ရဲယိုရွက် ၃ – ၄ရွက်ခူး၊ ရေစင်အောင်ဆေး၊ ဓားနဲ့လှီး၊ဆုံထဲကိုထည့်၊ အရည်ညှပ်ရတဲ့အထိထောင်း။ပျားရည်စစ်စစ်တစ်ဇွန်းထဲ။ ပြီးရင်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်။ အဆုပ်ထဲကို ဘာရောဂါမှ မဝင်နိုင်ပါ။ #credit Zawgyi အဆုပ္ထဲကို ဘာေရာဂါပိုးမွမဝင္နိုင္ေအာင္ ဘုန္းဘုန္းတို့ အျမဲေသာက္ေနက် ေဆးတစ္ခြက္ အဆုပ္ထဲကို ဘာေရာဂါပိုးမွမဝင္နိုင္ေအာင္ ကာကြယ္နည္း။ ရဲယိုရြက္ ၃ – ၄ရြက္ခူး၊ ေရစင္ေအာင္ေဆး၊ ဓားနဲ႔လွီး၊ဆုံထဲကိုထည့္၊ […]
ကြက်ဥ မကျက်တကျက်က ပိုအားရှိတာလား ? မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးကြက်ဥပြုတ် တစ်လုံးနဲ့ မကျက်တကျက် ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးနဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးတူတူပါပဲ။ အရပ်ထဲမှာပြောသလို မကျက်တကျက်ကမှ ပိုအားရှိတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျက်အောင်ပြုတ်လိုက်ရင် ပရိုတင်းဓါတ်တွေပျက်သွားလား? ပရိုတင်းရဲ့ သဘောက အပူနဲ့တွေရင်ပျက်ပါတယ်။ အပူနဲ့ မတွေ့လည်း အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်းထဲရောက်ရင် ချေဖျက်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ပရိုတင်းအလုံးကြီးကို သုံးတာမဟုတ်ပဲ ချေဖျက်ထားတဲ့ အမီနိုအက်ဆစ်လေးတွေကိုပဲ ယူသုံးလို့ ရတဲ့အာဟာရက အပူနဲ့တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့ကွာခြားသွားတာ မရှိပါဘူး။ အစိမ်းစားရင်ရော ? […]
အာရုံံကြောမှစကာ ရိုးတွင်းချဉ််ဆီထိိ အဆိပ်သင့်နိုင််သည့့် ခြင်ဆေးခွေ
အာရုံံကြောမှစကာ ရိုးတွင်းချဉ််ဆီထိိ အဆိပ်သင့်နိုင််သည့့် ခြင်ဆေးခွေ ခြင်ပေါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခြင်ကိိုက်ခံရတာကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် များသောအားဖြင့် ခြင်ဆေးခွေကို အလွယ်တကူ သုံးစွဲတက်ကြပါတယ်။ခုခေတ်မှာ ခြင်ရိိုက်တံ၊ ခြင်လိမ်းဆေးရည်စသဖြင့် အများကြီးပေါ်နေသော်လည်း လူအတော်များများဟာ ခြင်ဆေးခွေကို သုံးနေကြဆဲပါပဲ။ ခြင်ဆေးခွေကိို ၁၈၉၅ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံက Eiichiro Ueyama ဆိုသူက စတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဓါတုဗေဒနည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ခြင်ဆေးခွွေမှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း ဓါတုပစ္စည်းတွေ အများကြီးပါဝင်လာပါတယ်။ သုုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရ ခြင်ဆေးခွေအချို့မှာ အပြင်းထန်ဆုံး ဓါတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ […]
လူကို ထိရှစေသော ဆိုစကားများ
၁။ အချစ်ဟာ ကစားပွဲ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကစားတဲ့လူတွေက ဘာလို့ အဲလောက်များရတာလဲ။ ၂။ ယောက်ျား တစ်ယောက်အတွက် သင့်ရဲ့ မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာ မထိုက်တန်ပါဘူး…သင်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ယောက်ျားလေးဟာလည်း သင့်ကို မျက်ရည်ကျအောင် မလုပ်ပါဘူး။ ၃။ မိန်းကလေးတွေဟာ တယ်လီဖုန်းနဲ့ တူပါတယ်။ သင်က သူ့ကို ထိလို့ရတယ်၊ စကားပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခလုတ်မှားနှိပ်မိရင်တော့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါလိ်မ့်မယ်။ ၄။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပေါများဆုံး အရာ ၂ ခုက […]
ပညာရှင်တွေပြောတဲ့ လုံးဝလျစ်လျူမရှုထားသင့်တဲ့ အိမ်မက် ၅ ခု အဓိပ္ပါယ် အိမ်မက်ပညာရှင်တွေအဆိုအရ အိမ်မက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝနဲ့မသိစိတ်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို ပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အိမ်မက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုထိုးထွင်းသိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအိမ်မက်တွေဟာ မကြာခန ဒါမှမဟုတ် ရံဖန်ရံခါ မက်လေ့ရှိကြောင်း သင်သတိထားမိကောင်းထားမိပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မက်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူ့လူမျိုးရိုးရာဓလေ့အရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံတွေ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက Oneirologyလို့ခေါ်တဲ့ အိမ်မက်တွေနောက်ကွယ်က အဓိပ္ပါယ်ကိုလေ့လာတဲ့ပညာအရ စိတ်ပညာရှင်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ..ဒီတော့ သင်မက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် လျစ်လျူရှုထားတတ်တဲ့ အိမ်မက် တွေက […]